Lioka 6 - Ny Baiboly
Lioka toko 6
Ny mpianatra nioty salohim-bary - Ilay maty tànana - Izy roa ambin'ny folo lahy - Olona maro sitrana - Ilay Toriteny tany an-tendrombohitra - Izay sambatra - Izay hahita loza - Ny tena fitiavana namana - Ny tena fahendrena.
1Indray sabata raha nandeha namaky ny tanimbary Jesoa, dia nioty salohim-bary ny mpianany, ka nohaniny nony efa nokosokosohiny tamin'ny tànany. 2Dia hoy ny Farisiana sasany taminy: Nahoana hianareo no manao ny tsy fanao amin'ny sabata? 3Ary Jesoa namaly azy hoe: Tsy novakianareo va izay nataon'i Davida raha noana izy mbamin'izay nanaraka azy, 4fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka naka ny mofo alahatra, dia nihinana izany sy nanome izay nanaraka azy koa, nefa tsy misy mahazo mihinana azy afa-tsy ny mpisorona ihany? 5Sady nampiany hoe: Ny Zanak'olona no tompon'ny sabata.
6Indray sabata hafa koa dia niditra tao amin'ny sinagoga izy ka nampianatra, ary nisy lehilay anankiray maty tànana an-kavanana teo. 7Tamin'izay dia nitsikilo azy ny mpanora-dalàna sy ny Farisiana na hanasitrana amin'ny andro sabata izy na tsia, mba hahitany antony hiampangana azy. 8Fa fantatr'i Jesoa kosa ny hevitr'izy ireo, ka hoy izy tamin'ilay maty tànana: Mitsangàna ka mijoroa etsy afovoany. Dia nitsangana ilay io ka nijoro, 9ary hoy Jesoa tamin'izy ireo: Manontany anareo aho, inona no mety hatao amin'ny sabata, ny manao soa sa ny manao ratsy; ny mamonjy aina sa ny manala aina? 10Dia noherikerehiny nojerena daholo izy rehetra teo ka hoy izy tamin-dralehilahy: Ahinjiro ny tànanao. Dia nahinjiny ka sitrana terý ny tànany. 11Fa iretsy kosa safotry ny hatezerana, ka nioko ny amin'izay hanaovany an'i Jesoa.
12Ary tamin'izany andro izany, dia lasa tany an-tendrombohitra izy mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritra ny alina. 13Nony maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy ka nifidy roa ambin'ny folo lahy tamin'izy ireo, izay nomeny anarana hoe Apostoly: 14dia Simona izay nataony hoe Piera, sy Andre rahalahiny, Jakoba sy Joany, Filipo sy Bartelemy, 15Matio sy Tomà, Jakoba zanak'i Alfe, sy Simona izay atao hoe Zeloty, 16ary Jodà rahalahin'i Jakoba, sy Jodasy Iskariota ilay namadika.
17Dia niara-nidina tamin'izy ireo izy ka nankeo amin'ny tany lemaka izay nijanonan'ny mpianany maro sy ny vahoaka betsaka avy tany Jodea rehetra sy Jerosalema, ary ny tanin'i Tira sy Sidòna amoron-tsiraka, 18izay tonga teo mba hihaino azy, sy mba hositraniny amin'ny aretiny: dia nositraniny izay nampijalin'ny fanahy maloto, 19ary nitady hanendry azy ny vahoaka rehetra, satria nisy hery niala taminy ka nahasitrana azy rehetra.
20Tamin'izay, dia niatrana nijery an'ireo mpianany izy, ka nanao hoe: Sambatra hianareo mahantra, fa anareo ny fanjakan'ny lanitra. 21Sambatra hianareo noana ankehitriny, fa ho voky hianareo. Sambatra hianareo mitomany ankehitriny, fa hifaly hianareo. 22Ho sambatra hianareo raha hankahalain'ny olona, horoahiny amin'ny fikambanany, hotevatevainy ary holaviny toy ny zava-dratsy ny anaranareo, noho ny amin'ny Zanak'olona. 23Mifalia hianareo amin'izany andro izany ary miravoravoa, fa indro lehibe ny valisoanareo any an-danitra; fa tahaka izany koa no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany.
24Fa loza ho anareo kosa, ry mpanan-karena, fa manana ny fahafaham-ponareo hianareo. 25Loza ho anareo izay voky ankehitriny, fa ho noana hianareo. Loza ho anareo izay mihomehy ankehitriny, fa hitomany sy higogogogo hianareo. 26Loza ho anareo raha hataon'ny olona tsara laza hianareo, fa tahaka izany no nataon'ny razany tamin'ny mpaminany sandoka.
27Fa izao no lazaiko aminareo izay mihaino ahy: Tiavo ny fahavalonareo, manaova soa an'izay mankahala anareo, 28misaora an'izay manozona anareo ary mivavaha ho an'izay manisy ratsy anareo. 29Raha misy mamely ny takolakao anankiray, dia atolory azy koa ny ilany; ary raha misy maka ny lambanao, aza sakanana na halainy mbamin'ny akanjonao aza. 30Omeo izay rehetra mangataka aminao, ary raha misy mifaoka ny anananao, dia aza mitaky izany aminy intsony.
31Izay tianareo hataon'ny olona aminareo, no mba ataovy amin'ny olona koa. 32Raha izay tia anareo ihany no tianareo, fankasitrahana inona no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota aza tia izay tia azy koa. 33Raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toraka izany ihany koa. 34Ary raha izay antenainareo hanonitra ihany no ampisamborinareo, fankasitrahana inona moa no tokony ho anareo? Fa na dia ny mpanota koa aza, mampisambotra ny mpanota ihany, mba handraisany toraka izany. 35Fa hianareo kosa, tiavo ny fahavalonareo, manaova soa ary mampisambora tsy manantena valiny: dia ho lehibe ny valisoanareo, ary hianareo ho zanaky ny Avo indrindra, dia ilay tsara fo amin'ny tsy mpankasitraka sy ny ratsy fanahy.
36Aoka ho mpamindra fo tahaka ny Rainareo mpamindra fo hianareo. 37Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina hianareo; aza manameloka, dia tsy hohelohina hianareo; mamelà, dia havela hianareo. 38Manomeza, dia homena hianareo; fatra tsara, mifatratra, sady mihintsana no avo loha no homena ho ao am-pofoanareo: fa izay famarana namaranareo ihany no hamarana ho anareo koa.
39Ary izao koa no fanoharana nataony tamin'izy ireo: Moa ny jamba mahatari-dàlana ny jamba va? Moa tsy hiara-mianjera any an-kady va izy roa? 40Ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra, fa izay mpianatra tapi-pianarana no hoatra ny mpampianatra azy ihany.
41Nahoana no ny sombim-bozaka amin'ny mason'ny rahalahinao jerenao, nefa ny sakamandimby ao amin'ny masonao tsy hitanao? 42Ary ataonao ahoana no filaza amin'ny rahalahinao hoe: Ry rahalahy, aoka hoesoriko ny sombim-bozaka amin'ny masonao, nefa ny sakamandimby ao amin'ny masonao aza tsy hitanao? Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny sakamandimby amin'ny masonao, izay vao ho hitanao ny hanesoranao ny sombim-bozaka amin'ny mason'ny rahalahinao.
43Fa tsy misy hazo tsara mamoa voa ratsy, na hazo ratsy mamoa voa tsara. 44Fa samy fantatra amin'ny voany avy ny hazo rehetra; fa tsy misy mioty aviavy amin'ny tsilo, na voaloboka amin'ny voaroitsilo. 45Ny olona tsara fanahy dia mamoaka ny tsara avy amin'ny rakitra tsaran'ny fony; ary ny olona ratsy fanahy kosa mamoaka ny ratsy avy amin'ny rakitra ratsin'ny fony; fa ny be ao am-pony no itenenan'ny vavany.
46Ary nahoana hianareo no miantso ahy hoe: Tompoko, Tompoko, nefa tsy manao izay lazaiko? 47Hasehoko anareo izay azo anoharana ny olona rehetra manatona ahy ka mihaino ny teniko sy manatanteraka azy: 48tahaka ny olona anankiray manao trano izy, izay nihady lalina aloha vao nandatsaka ny fototra eo ambonin'ny vatolampy, ka nony tondraka ny rano dia nasian'ny riaka mafy izany trano izany, nefa tsy nampihontsina azy akory izany, satria tsara orina tambony vatolampy izy. 49Fa izay mihaino ihany kosa nefa tsy manaraka, dia tahaka ny olona anankiray nanorina ny tranony eo ambonin'ny tany tsy àry fototra, ka vao nasian'ny riaka, dia nirodana niaraka tamin'izay, ary loza ny faharavan'izany trano izany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0788 seconds